Qatar Airways ayaa ku dhawaaqday duulimaad maalinle ah oo ay ku tagayso Montreal
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Qatar Airways ayaa ku dhawaaqday duulimaad maalinle ah oo ay ku tagayso Montreal
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Qadar • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Kanada • News • Waajib ah • Technology • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Qatar Airways waxay ku faraxsan tahay inay ku dhawaaqdo inay bilaabi doonto duulimaadyo sii kordhaya oo ku sii jeeda Montréal laga bilaabo 16ka Janaayo 2021 waxayna shaqeyn doontaa maalin kasta inta u dhaxeysa 25ka Febraayo 2021, marka loo eego afartii isbuuc ee hore loo qorsheeyay. Adeegga Montréal waxaa ka shaqeeya Qatar Airways 'casriga casriga ah ee Airbus A350-900 oo ka kooban 36 kursi oo ah abaalmarinta abaalmarinta ee Qsuite Business Class iyo 247 kursi oo ka tirsan Heerka Dhaqaalaha.
Madaxa shirkadda Qatar Airways Group, Mudane Akbar Al Baker, ayaa yiri: “Waxaan ku faraxsanahay inaan kordhinno howlaheena Montréal, waxaan sii xoojineynaa isku xirnaanshaha macaamiisheenna reer Canada, iyadoo la siinayo rakaabkeenna u socdaalaya ama ka imanaya Waqooyiga Ameerika inay helaan marinno aan xad lahayn. 75 meelood oo ku kala yaal Afrika, Aasiya, Hindiya iyo Bariga Dhexe iyada oo loo marayo xarunteena abaalmarinta badan, Hamad International Airport.
"Waxaan weli ku adkeysan nahay inaan u adeegno macaamiisheenna Kanada waxaanna u shaqeynay si adag inta cudurku socdo si aan u hubinno inaan u shaqeyn karno duulimaadyo badan intii suurtagal ah, iyadoo la raacayo tilmaamaha dowladda Kanada. Laga soo bilaabo ka shaqeynta adeegyo gaar ah oo loo adeegsaday illaa duulimaadyo ganacsi oo dhowr ah, waxaan ku faraxsanahay inaan hadda bixinno jadwal adeegyo oo adag, oo ay weheliso iskaashigeennii dhowaan lagu dhawaaqay ee aan la wadaagnay Air Canada
Safiirka Canada ee Qatar, Marwo Danjire Stefanie McCollum, ayaa tiri: “Aad baan ugu faraxsanahay horumaradaan soo kordhay iyo isku xirnaanta balaaran ee Canada. Duulimaadyadan dheeriga ah waxay dadka safarka ah siin doonaan fursado badan oo ay ku ogaan karaan Kanada iyo waxa ay soo bandhigi karto oo dhan. Waxbarashadeena tayada sare leh iyo magaalooyin nabdoon ayaa soo jiidasho leh ardayda caalamiga ah, hadana waalidkood waxay heli doonaan fursado badan oo ay ku soo booqdaan oo ay ku sahamiyaan wadankeena quruxda badan ee soo dhaweynta leh. Hadda waxay u sahlanaan doontaa kuwa doonaya inay ballaariyaan ganacsigooda ama maalgashiga Kanada inay ku xirmaan duulimaadyadan, waxaana rajeyneynaa inay iyaguna ka faa'iideysan doonaan fursadaha dalxiis ee cajiibka ah ee iyaga sugaya.
Warkani wuxuu ku soo aadayaa iyadoo lagu dhawaaqayo heshiiskii ay dhawaan Qatar Airways la gashay shirkadda diyaaradaha ee Air Canada, kaas oo khuseeya duulimaadyada u dhexeeya Toronto iyo Doha. Heshiiska ayaa u sahlaya labada rakaab ee duulimaadyada inay ku raaxeystaan ​​isku xirnaansho la’aan, hal-joogsi iyo ka-soo-noqosho Toronto iyada oo loo sii marayo Madaarka ugu Fiican Bariga Dhexe, Madaarka Caalamiga ah ee Hamad iyo wixii ka sii dambeeya in ka badan 75 safar oo Afrika ah, Aasiya iyo Bariga Dhexe. Tani waa hal waddo oo Qatar Airways ay ku xoojineyso ballanqaadkeeda ku aaddan rakaabka Kanada iyo ganacsiga safarka iyo kor u qaadista isku xirnaanta adduunka ee Kanada si ay u taageerto soo kabashada dalxiiska iyo ganacsiga.
Qatar Airways ayaa markii ugu horreysay duulimaadyadeeda ka bilawday dalka Canada bishii Juun ee sanadkii 2011 iyada oo saddex duulimaad oo toddobaadle ah ku tagtay Montréal taas oo u ballaadhatay afar toddobaadle bishii Diseembar 2018. Ka dib markii ay si dhow ula shaqaysay dawladda Kanada iyo safaaradaha ay ku leedahay adduunka oo dhan inta cudurku ka jiro, Qatar Airways ayaa si ku meel gaadh ah u maamushay saddex adeeg oo toddobaadle ah. ilaa Toronto oo ay weheliso duulimaadyo badan oo kiro ah oo u socda Vancouver si looga caawiyo in guryahooda la keeno in ka badan 44,000 oo deganeyaal Canadian ah.
Qatar Airways maalgashi istiraatiiji ah oo lagu sameeyay matoorro mataano matoor ah oo shidaal wax ku ool ah, oo ay ku jiraan kuwa ugu waaweyn ee diyaaradaha Airbus A350, ayaa awood u siisay inay sii wado duulimaadkeeda inta lagu jiro dhibaatadan oo ay si fiican u dhigto si ay u horseedo soo kabashada waarta ee safarada caalamiga ah. Diyaaraddu waxay dhowaan qaadatay seddex diyaaradood oo casri ah Airbus A350-1000, iyadoo kordhisay wadarta guud ee A350 ilaa 52 iyadoo celcelis ahaan da'da ay tahay kaliya 2.6 sano. Saamaynta COVID-19 ee baahida safarka awgeed, shirkadda waxay hakisay raxankeeda Airbus A380s maadaama aysan deegaan ahaan qiil u lahayn inay ku shaqeyso diyaarad noocaan oo kale ah oo afar engine leh suuqa hadda jira. Qatar Airways ayaa sidoo kale dhowaan soo bandhigtay barnaamij cusub oo u sahlaya rakaabka inay si iskood ah u dheelitiraan qiiqa kaarboonka la xiriira safarkooda ee goobta ballansashada.
Saamaynta COVID-19 ee baahida safarka awgeed, shirkadda waxay hakisay raxankeeda Airbus A380s maadaama aysan deegaan ahaan qiil u lahayn inay ku shaqeyso diyaarad noocaan oo kale ah oo afar engine leh suuqa hadda jira. Qiimaynta gudaha ee diyaaradda ayaa isbarbar dhig ku sameysay A380 iyo A350 oo ka baxa waddooyinka Doha ilaa London, Guangzhou, Frankfurt, Paris, Melbourne, Sydney iyo New York. Duulimaad caadi ah oo hal dhinac ah, diyaaradda waxay heshay dayuuradda A350 inay keydisay ugu yaraan 16 tan oo ah kaarboon laba ogsaydh saacaddiiba marka la barbar dhigo A380. Falanqeyntu waxay ogaatay in A380 ay sii deysay in ka badan 80% in ka badan CO2 saacadiiba halkii A350 ay mari jirtay mid kasta oo ka mid ah jidadkan. Xaaladaha Melbourne iyo New York, A380 waxay sii daayeen 95% in kabadan CO2 saacadiiba saacad kasta iyadoo A350 ay keydinayso kudhowaad 20 tan oo ah CO2 saacadiiba. Ilaa iyo inta dalabka rakaabka uu dib ugala soo noqonayo heerarka ku haboon, Qatar Airways waxay sii wadi doontaa inay sii heyso diyaaradeeda A380, iyadoo hubineysa inay kaliya u shaqeyso diyaarado ganacsi ahaan iyo deegaan ahaanba masuul ka ah.
Rakaabka Heerka Ganacsiga ee u duulaya Montréal waxay ku raaxeysan doonaan abaalmarinta abaalmarinta ku guuleysatay kursiga fasalka ganacsiga, oo ay kujiraan albaabbo qarsoodi ah iyo ikhtiyaar loo adeegsado tilmaame 'Ha Rabin (DND)'. Qaab dhismeedka kursiga 'Qsuite' waa qaabeynta 1-2-1, oo dadka rakaabka ah siiya wax soo saarka Nooca Class-ka ah ee ugu waasacsan, ee sida gaarka ah u gaarka ah, raaxada leh iyo bulsho ahaanba kala fog. Qsuite waxaa laga helaa duulimaadyada in ka badan 45 meelood oo ay ku jiraan Johannesburg, Kuala Lumpur, Melbourne iyo Singapore.